U adkeyso bisadaha | Bisadaha Noti
Monica Sanchez | | Bisadaha
Sawirka - José Miguel
Markaad la nooshahay bisad waxyaabaha ugu badan ee lagula taliyo in la sameeyo ayaa ah bar inuu raaco suumanka. Kani waa xayawaan jecel inuu banaanka u baxo tamashle si uu dhulkiisa u soo indha indheeyo, laakiin dabcan, haddii aad ku nooshahay magaalo aad bay khatar u tahay inaad u ogolaato inuu banaanka u baxo, maxaa yeelay noloshiisu aad bay khatar ugu jiri kartaa.
Si taas looga fogaado, waa lagama maarmaan in loo kaxeeyo isaga ugu yaraan hal mar maalintii meel deggan, oo aan mashquul badnayn. In kasta oo dabcan, taas waxaad u baahan doontaa a suul bisad. Bal eeg xulkeena.
1 Lahaanshaha Bisad Buluug Firfircoon
2 Soft Dog Mesh Harness Vest
3 Suunka la neefsan karo
4 Suumanka maro jilicsan ee dhalaalaya
5 Suunka suufka
6 Suunka badbaadada gaariga
7 Suunka Denim leh suunka la hagaajin karo
Lahaanshaha Bisad Buluug Firfircoon
Suumanka waa inuu ahaadaa mid raaxo leh oo adkeysi leh. Jirka bisadu aad ayuu uga yaryahay kan eeyaha, markaa si fudud ayuu u jaban karaa. Laakiin xirashadaan uma baahnid inaad ka walwasho. Waxaa laga sameeyay mesh fudud iyo jilicsan, oo wuxuu leeyahay xiritaan dhaqso leh furitaan iyo xirid fudud. Waxa kale oo ku jira suunka 120cm.
Wareegga qoorta: qiyaastii 28cm.
Wareegga dhexda: 34-44cm.
Price: 16,36 euros oo lagu daray kharashka rarka.
Waxaad awoodi kartaa halkan ka iibso
Soft Dog Mesh Harness Vest
Tani waa nooc kale oo aad u xiiso badan oo raaxo leh bisadaha. Waxaad ku haysaa dhowr midab: madow, casaan, buluug, casaan iyo guduud, iyo waliba cabbirro kala duwan, dhammaantood waa la hagaajin karaa. Xaalada bisadaha, waxay ahaan lahaayeen kuwa cabirka XS, kuwa cabirka S, ama kuwa cabirka M, kuwaas oo cabirkoodu yahay:
XS: Qoorta 22cm; wareegga dhexda 28-38cm.
S: Qoorta 26cm; wareegga dhexda 30-42cm.
M: Qoorta 32cm; wareegga dhexda 35-50cm.
Qiimaheeda waa kudhowaad 4,47 euros, oo lagu daray kharashka dhoofinta.
Suunka la neefsan karo
Gaar ahaan xilliga kuleylaha waxaa lagugula talinayaa inaad xirato suunka neefsanaya. Qaabkan, marka lagu daro, waxay noqon doontaa mid aad u raaxo leh. Waxay ka duwan tahay kuwa aan ilaa hadda aragnay, waxay leedahay daabacaad aad u wanaagsan oo ku harsan doonta dhabarkaaga. Waxaa laga sameeyay polyester tayo sare leh, markaa waa mid aad u adkaysi badan oo jilicsan isla waqtigaas. Waxaad ku haysaa midab madow, casaan iyo buluug ah. Waxaad arki doontaa inay jiraan cabirro kaladuwan, oo loogu talagalay bisadaha XS, S ama M. Cabbiraadaha ayaa la mid ah kiiskii hore:
Qiimaheedu waa 5,84 euros, jacks maraakiibta badan.
Waad ku samayn kartaa halkan riix
Suumanka maro jilicsan ee dhalaalaya
Haddii aad rabto bisaddaadu inay ahaato mid aad u qurux badan oo leh xarigeeda, ma tabi kartid tusaalahan. Waxaa laga sameeyay dhar microfiber jilicsan, waana mid raaxo leh. Waxay xidhataa xoogaa wiyil ah oo aad u qurux badan. Sida aysan taasi ku filnayn, waxaad ku haysataa buluug, madow, casaan iyo guduud, dhammaantoodna waxay leeyihiin suunka.
Wareegga dhexda: 38cm.
Iyo qiimaheeda 5,99 euros oo lagu daray kharashka rarka.
Ma danaynaysaa? Halkan guji
Raadinta suunka runti raaxada iyo jilicsanaanta leh? Kadib suunka cudbigan ayaa loogu talagalay adiga, waa hagaag, bisaddaada 🙂. Waxaa laga sameeyay suuf tayo sare leh, taas oo ka dhigaysa mid aad u adag oo ammaan ah. Waxaad kuheleysaa midabbo dhowr ah: madow, casaan iyo guduud, marka waxaad dooran kartaa midka aad ugu jeceshahay. Iyo, waxaad sidoo kale ku leedahay cabbirro kala duwan, XS, S, M, kuwaas oo cabbiradoodu yihiin:
Qiimaheedu waa 4,38 euros oo lagu daray kharashka rarka.
Adigaa iska leh halkan riix
Suunka badbaadada gaariga
In kasta oo sida caadiga ah bisadda ka saari doonin xamuulka markaan safar galno, runta ayaa ah haddii aan raacno gaari oo safarku aad u dheer yahay, xayawaanku wuu ku caajisi karaa inuu ku jiro side. Xaaladahan oo kale, suunka badbaadada ayaa si aad ah loogu taliyay oo aad wax ku ool u ah, maadaama ay noo oggolaaneyso inaan ku yeelano dhogorta kursiga dambe si ammaan ah. Moodelkan gaarka ah sidoo kale waxay ka sameysan tahay naylon, qalab raaxo leh laakiin adkeysi leh. Waxaa loo tilmaamay bisadaha (ama eeyaha) oo culeyskoodu yahay 4kg.
Waxaad ku haysataa laba cabbir: S iyo M (35-60cm).
Qiimaheedu waa 11,95 euros, oo lagu daray kharashka dhoofinta.
Ha joogin la'aantiis halkan ka iibso
Suunka Denim leh suunka la hagaajin karo
Xirashada noocan ah, in kastoo ay u muuqan karto si kale, waa mid aad u fiican. Waxaa laga sameeyay denim tayo sare leh, noqoshada suun aad u casri ah oo waara. Haddayna intaas ku filnayn, waxaa ku jira suunka isku habboon. Waxaad ku haysaa cabbirka S, oo cabirkiisu yahay: qoorta 26cm; wareegga dhexda 30-42cm.
Qiimaheedu waa 7,49 euros oo lagu daray kharashka rarka.
Ma jeceshahay Halkan guji
Haddana su’aasha milyanka doollar ah, kee baa aad ugu jeceshahay? 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Qalabka Bisadda
Jaajjaja waa bisadeeydii, xirashada wuxuu hayaa gaashaanti yaryarka ah ee Boca waxaan ka qaaday sawirkaas !! ninkeyga buuran wuxuu caan kuyahay qaaraddii hore….
Bisad qurux badan Hore ayaan magacaaga ugu hoos galnay sawirka 🙂
Waad salaaman tihiin. Waxaan xiiseynayaa suumanka sida kan sawirka ku jira. Uruguay ma awoodo. José Miguel, halkee ka iibsatay? Waxaan qiyaasayaa inaad tahay Argentine oo leh boca Junior crest?!? Mahadsanid
Maxaa lagu sameeyaa bisad fallaagow?